Mogadishu Journal » Mareykanka oo markii ugu horysay sheegay in ay saraakiil ciidan ka joogaan Soomaaliya
Mjournal : –Dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay shaacisay in ay gudaha dalka Soomaaliya ay ka joogaan sida ay hadalka u dhigtay unuk ka mid ah ciidamadooda, kuwaa oo u badan saraakiil la taliyayaal ah.
Warkan oo lagu daacabay wargeysay Washington Post ayaa soo xigtay Saraakiil ka tirsan Mareykaka oo sheegay in Mareykanka in bishii October ee sanadkii u hore u diray Soomaaliya la taliyayaal dhinaca militariga markii u horeysay tan iyo markii sanadkii 1993 Mareykanka looga dilay Muqdisho 18 askari, loogana soo riday diyaaradii caanka aheyd ee Black Hawk Down, kaasoo laga sameeyay Film.
Waxaa uu sheegay sarkaalka warkan laga soo xigtay in tiro ka mid ah saraakiisha Mareykanka ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya bishii November ee sanadkii hore bilaabeen in ay siiyaan la talin iyo isku xir howl galada ka dhanka ah Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida.
Col. Tom Davis oo ah Afhayeenka Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay inay taageerayaan Ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida, si loo hormariyo awooda nabadgelyada Soomaaliya, isla markaana loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Tallaabada ay dowladda Mareykanka ku dhaqaaqday ayaa muujineysa sida ay xukuumada Washigton uga go’an tahay dagaallka ka dhanka ah wax ay ugu yeerto argagixisada oo ay ka mid tahay kooxda Al-shabaab oo ah urur xiriir toos ah la la leh urur weynaha Al-Qaacida.
Mareykanka ayaa indhawaalaba waxaa uu shaki gelinaya qatarta Islaamiyiin mayal adag oo ku xiran Al-Qaacida oo ku sugan dalalka Waqooyiga iyo Geeska Afrika, kuwaasoo ku soo xoogeysanayay sanadihii u dambeeyay.
Dowladda oo sheegtay in aan dhag loo dhigin mamnuucista Internet-ka ee Al-shabaab